काठमाडौं । हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी बहालवाला मन्त्रीलगायतको मृत्यु भएको शोकमा देश परेको छ । कुनै अप्रत्यासित दुर्घटना हुनसक्ने संकेत चर्चित ज्यो. दीपक सुवेदीले डेढदुई महिना अघि नै गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । स्रोतका अनुसार न्यूज टिम अघि लेख्दछ– कुरा लगभग डेढ दुईमहिना अघिको हो । जतिबेला कुनै स्वघोषित ज्योतिषीले समाजमा ज्योतिष आतंक बच्चाइरहेका थिए । माघ फागुनमा काठमाडौंको एयरपोर्ट क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना हुने आतंक मच्चिरहेको थियो । मान्छेको अनुहार हेरेर प्रधानमन्त्री बन्ने ग्यारेन्टि गर्ने लगायतका हल्लाबाजी थियो । पछि ती ज्योतिषीले रवि लामिछानेको विवाह हुँदैन भनेकोमा रविले लगत्तै अदालतमार्फत विवाह गरे । समाजमा ज्योतिष विषयलाई लिएर अन्यौल सृजना भइसकेको थियो ।
समाजमा ज्योतिष आतंक चलिरहे पछि न्यूजटिमले त्यसको बारेमा खास के हो त भन्ने सोध्न बेलाबेलामा विभिन्न खालका सिद्ध भविष्यवाणी गर्न सफल भएका ज्यो. दीपक सुवेदी अर्थात दीपक गुरुलाई भेटेर केही भलाकुसारी गरेका थियौं । सो समयमा ज्यो. दीपक सुवेदीले बताउनु भएको कुरा यतिबेला घट्न पुगेको छ । सो भेट्मा उहाँले फागुनको दोस्रो हप्तामा केही ग्रहले स्थान परिवर्तन गर्दै गरेको आदि कुराको चर्चा गर्दै एयरपोर्ट वा निश्चित ठाऊँ नै भन्न मिल्दैन तर आकस्मिक अथवा अप्रत्यासित घटना दुर्घटना घट्नसक्छ भन्नु भएको थियो ।
उहाँसँग गरेको संवादको सामाग्री आसनेपाल डट्कम, न्यूज अभियान डट्कम, हाम्रो सन्देश डट्कम, इनेप्लिज डट्कम, सहारापाटी डट्कम लगायतले प्रकाशन गरेका थिए, जसलाई सर्च गरी हेर्न र पढ्न सकिन्छ । सो भेट्मा ज्यो. सुवेदीले विभिन्न विषय वस्तुको चर्चा गर्दै अप्रत्यासित स्थिति सृजना वा घटनालाई ग्रहले स्पष्टरुपमा संकेत गरेको भन्दै दुर्घटनाको समेत संकेत गर्नु भएको कुरा यो समयमा स्मरण भइरहेको छ ।
हुनसक्ने घटना तथा दुर्घटनाको पूर्वानुमान गर्ने ज्योतिष विज्ञानको मार्गदर्शनलाई आत्मसात गरी यसको संरक्षण एवं वैज्ञानिक व्यवहारको लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिई नागरिकलाई यसबाट हुने लाभ एवं जानकारीबाट सुसूचित गर्न जरुरी छ ।
भनिन्छ राजा विरेन्द्रको मृत्युको भविष्यवाणी गर्नु भएका ज्यो. दीपक सुवेदीले पहिलो संविधानसभा र त्यतिबेलाको राजनीतिक संयन्त्रले कुनै पनि निकास नदिने लगायतका अनौठा भविष्यवाणी गर्ने गर्नुभएको थियो । जुन भविष्यवाणीहरु सिद्ध भएका थिए । उहाँले अरु पनि केही राष्ट्रिय भविष्यवाणी गर्नु भएको छ । उहाँका भविष्यवाणीको बारेमा संबन्धित पक्ष एवं निकायले ध्यान दिनु उचित होला कि !
More in this category: « त्रिविका सहायक डिन साह माथि कालोमोसो	मन्त्री अधिकारीको अन्त्येष्टि गृह जिल्लामा हुने »